Xildhibaanno aaminsan inuusan dib u kulmi doonin Golaha Shacabka Kalfadhigan – Kalfadhi
Xildhibaanno aaminsan inuusan dib u kulmi doonin Golaha Shacabka Kalfadhigan
Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi, oo tirsan Golaha Shacabka, ayaa kalfadhi u sheegay in aysan suuragal ahayn inuu qabsoomo kulanka 33-aad ee Golaha Shacabka, ka hor inta uusan xirmin Kalfadhiga 4-aad ee Golaha, kaas oo maanta baaqanaya maalinkii 4-aad. “Ma u malaynayo in uu dhacayo kulanka Golaha Shacabka ee lagu balansan yahay Isniinta” ayuu yiri Xildhibaan Jindi. “Lakiin, xitaa hadii uu dhaco waxaa la weyn doonaa Kooram, oo xildhibaannadu majoogaan intooda badan” ayuu ku yiri Kalfadhi.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow, oo isaguna la hadlay Kalfadhi, ayaa sheegay in aysan ogayn xiliga uu dhacayo kullanka Golaha Shacabka inta uusan xirmin Kalfadhigan. “Lama yaqaan xiliga uu dhacayo kullanka Golaha Shacabka, cid noo yeertayna ma jirto” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow. “Guddoonka Golaha Shacabka ayey ahayd in ay ka shaqeeyaan in uu kulmo Golaha, waana waajib ayaga saaran” ayuu Xildhibaan Jeesow hadalkiisa ku daray.
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa sheegay in ay Baarlamaanka Soomaaliya ag yaalaan 29 Hindise Sharciyeed, oo ay qaarna horyaalaan Golaha Shacabka, qaarna Golaha Aqalka Sare. 2-dii sano ee ay dowladdiisa jirtay ayuu sheegay inuu saxiixay 2 Hindise Sharciyeed oo kaliya, “waana inta i soo gaartay” buu yiri Madaxweynuhu.
“Sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkan laba sharci bis ayaan saxiixay, waxaana sugeynay intaas iyo in ka badan” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo. “Waxaan ka codsanayaa Golaha Shacabka ee sharafta leh iyo Golaha Aqalka Sare in inta hartay ay si dhaqsiya iigu soo gudbiyaan” ayuu Madaxweynuhu hadalkiisa raaciyey. “Waxaan hubaa in labaatan iyo sagaalkaas (Hindise Sharciyeedyo) ay ku dhameyn doonaan muddo aad iyo aad u kooban” ayuu, sidoo kale, yiri Madaxweyne Farmaajo.
Laakiin, Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa uu sheegay Kalfadhi in aysan shaqo badan hada u oolin Golaha Shacabka, sida uu hadalka u dhigay. “(Hindise) Xeer oo Golaha Shacabka hor yaala waxaa ka jira (Hindisaha) Xeerka Hanti Dhowrka Guud ee Qaranka, waxaana u malaynayaa in lagu ansixinayo Kalfadhigan” ayuu kalfadhi ku yiri Xildhibaan Dahir Amiim Jeesow.
Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi, oo isna la wadaagay Kalfadhi dhowrka Hindise Sharciyeed ee horyaala Golaha Shacabka, ayaa yiri “waxaan qabaa in aanan culeeska la saarin Hindise Sharcigeedyadaan faraha badan, waayo kuwii horay loo ansixiyay ayaan jirin cid ku dhaqanta ama dhaqan galisa”.
Yaxye Caamir: Sharci maaha ansixinta Miisaaniyad Cusub, iyadoo Miisaaniyaddii Hore furan tahay
Musharraxiinta Madaxweynaha Puntland oo siyaasaddooda maanta la wadaagay Baarlamaanka